Fihanaky ny valanaretina :: Faritany dimy ahitana « coronavirus » • AoRaha
Miparitaka any amin’ ny faritany efatra ivelan’Antananarivo ny valanaretina « Coronavirus ». Efa nahitana tranga voamarina avokoa ny faritanin’i Toamasina, Fianarantsoa, Toliara sy ny eto Antananarivo. Vao omaly kosa no nanambaràna ny fisian’ny olona mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 any Antsiranana araka ny tatitra ofisialy.
Tafakatra fito amby dimam-polo ireo olona voamarina fa voan’ny « Coronavirus » eto Madagasikara, ankehitriny. Olona efatra vaovao voan’io aretina io no nampahafantarin’ny Pr Vololontiana Hanta , mpitondra tenin’ny Ivontoeram-pibaikoana momba ny « Covid- 19 », omaly tamin’ny dimy ora hariva, tao amin’ny Fahitalavi-pirenena.
Marary telo hafa, fantatra afak’omaly, araka ny fanambaran’ny Filohan’ny Repoblika kosa no mameno isa ho dimampolo. Avy any Morondava sy Fianarantsoa izy ireo.
Lehilahy avokoa iretsy olona efatra voamarina fa marary, omaly, iretsy. «Teratany vahiny ny telo amin’izy ireo. Malagasy kosa ny iray. Ny iraika ambin’ny folo amin’ireo dimampolo marary no ahitana soritr’aretina », hoy ny Pr Vololontiana Hanta. Nampiany fa mbola misy singa hafa jerena manokana vao afaka manambara na sitrana soa aman-tsara ny olona iray mararin’ny « Coronavirus » na tsia.
Olona efatra amby efapolo no fantatra fa arahi-maso akaiky, any Antsirabe, amin’ny valanaretina « Coronavirus ». Nihatra, omaly, ny fepetra fa tsy misy mahazo mivezivezy manomboka amin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny 5 ora maraina any an-toerana.
« Tsy miasa intsony ny fitateram-bahoaka toy ny taksibe sy ny fiarakaretsaka. Mbola mandeha ihany kosa ireo posiposy saingy olona iray ihany no azony entina », hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Any an-tranony avokoa no arahi-maso ny ankamaroan’ny marary any Antsirabe. Ny telo ambin’ny folo kosa any amin’ny trano fandraisam-bahiny.
Mpandeha avy any ivelany dimy arivo mahery efa nahavita ny fe-potoana fihibohana no hatao fitiliana maika etsy amin’ny CCI Ivato sy Jumbo Score Ankorondrano, hatramin’ny rahampitso. Olona roanjato sy arivo isan’andro no tiliana. Zaraina vondrona roa izy ireo ka ny vondrona voalohany mankeny Ivato. Etsy Ankorondrano kosa no mandeha ny eninjato ambiny.
Alahatra tsiroaroa ireo mpandeha ary savaina ny pasipaoron’izy ireo. Mpitsabo roapolo mahery no miara-mientana manao ny fitiliana. Mandritra ny dimy ambin’ny folo minitra ny faharetan’ny fitiliana ny olona iray. Eo no ho eo kosa no hanomezana ny taratasy fanamarinampahasalamana raha voaporofo fa tsy mitondra ny tsimok’aretina « Coronavirus » ilay mpandeha. Averina hahiboka izy raha hita fa mitondra ny tsimok’ aretina « Covid-19 ». Ny fanjakana hatrany no hiantoka ny lany rehetra.
Fiomanana amin’ny fetin’ny paska :: Hitety tokantrano ireo mpitondra fivavahana mandritra ny Herinandro masina
Voka-dratsin’ny valanaretina :: Manahy krizy ara-tsosialy ny SEFAFI